နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှို Precision ထုတ်ကုန်များ China Manufacturers & Suppliers & Factory
နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှို Precision ထုတ်ကုန်များ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှို Precision ထုတ်ကုန်များ ထုတ်ကုန်များ)
remote control shell ကိုထုတ်လုပ်မှု
remote control shell ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ဆေးထိုးစက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များအားဖြင့်တိကျဆေးထိုးအဓိကအားဖြင့်အာကာသ, မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, တိကျတူရိယာ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ, စမ်းသပ်ကိရိယာများ, နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လူထုအခြေပြုထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။ အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ,...
Semisolid မဂ္ဂနီစီယမ်-အလွိုင်းထုတ်ကုန်များ, Semisolid သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့, Semisolid ဖွဲ့စည်းနည်းပညာပိုက်ကွန်ကိုဘုံသတ္တုများပုံသွန်း (စင်ကြယ်သောအရည်) အကြားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွဲ့စည်းနှင့် (အစိုင်အခဲစင်ကြယ်သော) အတုလုပ်တဲ့အနီးရှိရေတိုလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်။...
သတ္တု Tableware ၏ထုတ်ကုန်များ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များပေါ်တွင်အခြေခံသတ္တုစပ်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများသေးငယ်တဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတိကျတဲ့ခွန်အား elasticity ၏ကြီးမားသောကိန်းပကတိတန်ဖိုး, ကောင်းသောစျေးမှာစုပ်ယူမှုမြင့်မားသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ချေးခုခံကြသည်။ ဇိမ်ခံ, ကောင်းသော texture...
မြင့်မားသော Precision စက်အစိတ်အပိုင်းများမဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် Die
semi-အစိုင်အခဲသတ္တုများပုံသွန်းပုံမှန်အားဖြင့် High-end Cast များအတွက်အသုံးပြုသည်။ လူမီနီယံသတ္တုစပ်အဘို့, ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်တောင်ပေါ်, လေထူးထူးအပြားပြားအာရုံခံကိရိယာထဲကနေအလားတူ, အင်ဂျင်လုပ်ကွက်များနှင့်ရေနံစုပ်စက် filter ကိုအိမ်ရာတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံနှင့်လေယာဉ်တင် House,...
စိတ်တိုင်းကျဝန်ဆောင်မှုပုံသွင်းထား Precision လူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
ကထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွက်အသုံးပြုသည်အဖြစ်လူမီနီယမ်သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, ယနေ့သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အသုံးပြုအသုံးအများဆုံးအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့က၎င်း၏စနစ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်းအာမခံနှင့် ပို....
မြင့်မားသော Precision အဝါရောင်သို့ပြန်သွားရန်ဖုံးမူရင်း Casting Die
(စနှိပ်အဖြစ်လူသိများ) နေမှုကိုချေဖျက်ဘယ်မှာ tool ကိုတစ်ဦးနေမှုကိုချေဖျက်စာနယ်ဇင်းသို့အလွတ်သို့မဟုတ်ကွိုင်ဖြစ်စေ form မှာပြားချပ်ချပ်စာရွက်သတ္တုအားမရ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပိုက်ကွန်ပုံသဏ္ဍာန်သို့မျက်နှာပြင်ပုံစံများသတ္တုသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ သတ္တု, စိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီး applications...
စိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ components မော်တော်ကား, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကရိယာများနှင့်လက် tools တွေကိုဥပမာ, များစွာသောဒေသများရှိအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အတွက်ပြည့်စုံထောက်ခံမှုသင့်လျော်သောပစ္စည်းကိရိယာများ, အသံနည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူဖြစ်စဉ်ကို Casting Die...
အစိတ်အပိုင်းများ Casting high Precision စက်ပစ္စည်း Semi-Solid သေ
တိုင်း CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သံသရာအတွက်နေရာမှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေနဲ့မတူပဲ, CNC စက်သင့်ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသံသရာမဆိုပေးထားအဆင့်မှာသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးကိုပညာရှိရှေးခယျြမှုဖြစ်နိုငျသောအမည်ခံတစ်လောကလုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်တိကျစွာ CNC...
မြင့်မားသော Precision အစိတ်အပိုင်းများစိတ်ကြိုက် Casting Die
ပေါ့ပါးတဲ့သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာပစ္စည်းအမျှမြင့်မားသော Precision မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဇင့်၏လူမီနီယံ၏ 2/3 ညီမျှဖြစ်သော l.74gcm တစ်သိပ်သည်းဆ, သံမဏိ 1/4 နှင့်ဌ /4ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဝိသေသခေတ်သစ်ထုတ်ကုန်များ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချဖို့အလွန်အရေးပါသည်။...
စိတ်ကြိုက် Precision Semi Solid သေကာစ်စက်ရုံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသေ Cast ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်ကပ်။ ဒီထုတ်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ကြမ်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားဒီဇိုင်းကိုတိကျစွာအသုံးပြုသည်။...
Precision ရောင်းချ semi Casting မျက်မှန် Frame က Die
အဆိုပါ semisolid အလွယ်တကူဘုံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော dendrite ကွန်ယက်ကိုအရိုးစုကွဲပြား granular တစ်ရှူးပုံစံဖွဲ့စည်းဖို့လည်းကျိုးကြောင်းဒါကြောင့်တိကျမျက်စိဘောင်, semisolid သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, ချ. , အရှင်အောင်, အရည်သတ္တုများ၏ solidification လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နှိုးဆော်နေပါတယ်သေဆုံး အဆိုပါ...
စက်ရုံစိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision Semi-Solid သေကာစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိအားသတ္တုများပုံသွန်းဖြေရှင်းချက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်များကို high-performance ကိုလူမီနီယံသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုင်တွယ်ရန်ညှိကြောင်းစနစ်, deburring, တူးဖော်ခြင်း, Threading, polishing နှင့်အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်စနစ်ကိုလည်း sandblasting,...
OEM CNC စက်ပစ္စည်းအမြင့် Precision ခုံအစိတ်အပိုင်းများ Turn
လူမီနီယမ်ဟာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးအများဆုံးအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နေဆဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းများအတွက်အရှိဆုံးချွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ကာစ် Die ကိုရှာဖွေနေ့တိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ,...
နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှို Precision ထုတ်ကုန်များ
နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
အသေးစား Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ
PA ဆိုပြီးပစ္စည်း Injection ကိုမှိုထုတ်လုပ်မှု
အကြီးစား Injection ကိုမှို၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
နှစ်ဦးကို Injection ကိုမှို